Ezolimo ziwubizo kumlimi osemncane
EZOLIMO ziwubizo kuNksz Andiswa Moolman osenepulazi lakhe i-AM Farm Isithombe: SITHUNYELWE
EZOLIMO ziwubizo kumlimi osemncane nosenepulazi elithi yena, i-AM Farm, eNyoni, ngaseMandeni.
UNksz Andiswa Moolman (21), obaziwa ngoDlamini, uthe uzibone esesemabangeni aphakeme ukuthi ungumlimi. Uthi wayenezinhlelo zokuthi angene esikhungweni semfundo ephakeme lapho abezoyofundela khona ukutshala amagilebhisi njengoba ebezifela ngokuba ngumphisi wewayini.
Ukushoda ngemali yokufunda uthi kwenza wathatha isinqumo sokwenza eminye imisebenzi kodwa ugcine esengenile kwezolimo.
Uthe ngaphandle kokuba wumlimi, ubethanda nezinto ezithinta ezokusakaza.
“Ngesikhathi ngiphothula uMatric Ohlange High School ngo-2019, ngithathe isinqumo sokuyofuna umsebenzi emsakazweni. Ngiqashwe kwiDurban Youth Radio lapho ngifike khona ngaba wuphrojusa wohlelo lukaZulu Boy noVee Brown, iMusic and Lunch. Ukusebenza khona kungikhulisile kakhulu ekuhleleni nemicimbi kodwa bengingakhohliwe ukuthi ngizimisele ngokuba wumlimi. Ngenxa yokuthi bekuyinto ehlala isematheni kumina ukuthi ngifuna ukuba wumlimi, nabaphathi bami kwiDurban Youth Radio bebengigqugquzela ukuthi ngilandele iphupho lami,” kusho uNksz Moolman.
Uthe omunye wabaphathi bakhe kwiDYR wamtshela ukuthi usekulungele ukuthi angaya nakweminye imisakazo ngenxa yokuthi ubeseqeqeshekile ekulo msakazo, aphinde amgqugquzele nangokulandela iphupho lakhe.
Uthe ushiye kwiDYR waya kwiRadio Life kodwa khona akahlalanga njengoba bediliziwe.
“Emva kokudilizwa kwiRadio Life ngoJanuwari kulo nyaka, ngithathe isinqumo sokusebenzisa imali ebengiyigcinile ukuthenga ipulazi. Ngikwazile ukuthenga indawo engu-6 hectares eNyoni, okuyiyona engitshala kuyona izitshalo. Ngesikhathi ngifika khona ngithole ukuthi abantu abaningi batshale umoba, mina ngafuna ukuqhamuka nokwehlukile.
Ngenhlanhla umhlabathi wakhona uyahambisana nezitshalo engizitshala khona. Kumanje ipulazi lami liyasebenza futhi ngiqashe abantu abangu-10 bakhona endaweni. Izitshalo zami ngizidayisela izimakethe eziseduze ngiphinde ngidayisele nabantu abasuke befuna ukudla okusha okusasuka emasimini. Senginazo nezinto zokutshala nezokuchelela kanti nomnyango wezoLimo kwiLembe ungixhasile ukuthi kuqhubeke umsebenzi,'’ usho kanje.
Uthe uphinde athekele ulwazi nakubantu asebemnkantshubomvu kwezolimo njengoba bebaningi asexhumene nabo ngenxa yalo msebenzi wakhe. Uthe kukhona nabahlola indawo yakhe ukuthi yonke into uyitshala ngendlela yini ukuze abe nezitshalo ezisezingeni.
Echaza ngempilo yakhe uNksz Moolman, uthe uzalwa nguMnuz Jackie Moolman noNksz Nomfundo Dlamini abangasekho emhlabeni. Uthe unguzinyobulala kubazali bakhe.
Amabanga aphansi uwaqale eNorthcoast Primary School, waphothula uMatric ngo-2019 Ohlange High School.
Kafushane ngoNksz Moolman:
– Ekudleni uthe uthanda ispinashi nesiphuzo esenziwe ngamagilebhisi
– Into emjabulisayo kakhulu empilweni wukuthola isisombululo kuzona zonke izingqinambi asuke ebhekene nazo ngaleso sikhathi
– Ezimotweni uthanda i-Audi
– Into ayikhonzile yizimbali, athi uyazikha azitshale egcekeni bese eyazinakekela
– Uma engekho matasa nomsebenzi, ukhonze ukushaywa wumoya ngokuya endaweni yokudla asuke ethanda ukuya kuyona ngaleso sikhathi nokufunda izincwadi
– Akazikhonzile ezemidlalo
– Emsakazweni ukhonze ukulalela umculo kodwa akayibuki ithelevishini
– Ngonyaka ozayo uthe uzoyofundela ezolimo eCedara College of Agriculture